[I-Zhejiang Road Junction B&B] Ibhalkhoni enkulu/Ukukhanya kwale mihla kunye nokungqubana kwezobugcisa/Kuxhotyiswe ngokupheleleyo/Uthutho olulula. - I-Airbnb
[I-Zhejiang Road Junction B&B] Ibhalkhoni enkulu/Ukukhanya kwale mihla kunye nokungqubana kwezobugcisa/Kuxhotyiswe ngokupheleleyo/Uthutho olulula.
Iflethi yonke sinombuki zindwendwe ongu认证手机用户7799
Indawo entle: Kwiimitha eziyi-500 ezikufutshane ziquka zonke izinto ezinokusetyenziswa ezisisiseko, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, ezonyango, iibhanki nezolonwabo!
Izithuthi ezimnandi: Indawo yokumisa ibhasi isezantsi, imizuzu eyi-10 ukuya kweyi-15 ukuya embindini wedolophu, malunga nemizuzu eyi-20 ukusuka kwisikhululo seenqwelo-moya, imizuzu eyi-15 ukusuka kwisikhululo setreyini (ngaphandle kwezithuthi)
Indawo entle: Umgangatho osezantsi unegadi yawo kunye nezinto zokuzonwabisa zabantwana, ibala le-basketball
Izinto ezifanelekileyo: I-PS4, iprojekta, imidlalo yebhodi kunye nezinye iindawo zokuzonwabisa egumbini.
Inkonzo entle: Ukutshintsha kwemihla ngemihla kwezinto zebhedi njl.,
Indawo ekuyo indlu inegadi yayo ephakathi nendawo kunye nendawo yokuzonwabisa yabantwana, ibala lebasketball elahlukileyo, elijikelezwe ziimarike ezinkulu, izibhedlele, iibhanki, iivenkile zokutyela ezikhethekileyo zasekuhlaleni, ukuzonwabisa, njl. ngaphakathi kweemitha ezingama-500.Imizuzu eyi-20 ukuya kweyi-25 xa uhamba ngesikhululo seenqwelo-moya kunye nesikhululo setreyini esiphezulu.
Le ndlu ixhotyiswe nge-TV, i-projector, i-WiFi, i-PS4, imidlalo yebhodi, i-Imidlalo yebhodi.Ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezakhiwo.
Umnikazi anganikezela ngeenkonzo zokukhenketha ezikufutshane (ezibhataliswa ecaleni)
Ukupheka kuvumelekile, izixhobo zasekhitshini kunye nezinto ezisisiseko ziyafumaneka, akukho zinto zokupheka, kufuneka uzicoce emva kokupheka, kukho imali yokucoca eyi-50 yuan ukuba ayicocwanga.
Le ndlu ifumaneka eMaojian District, eShiyan City, eWuyu Street, eZambia Road naseZhejiang Road. Izithuthi zifumaneka lula. Ukuma kwebhasi ezantsi ngokuyintloko kugubungela zonke iindawo zeSixeko saseShiyan. Kuthatha malunga nemizuzu eyi-10 ukufika embindini wesixeko, kwaye kuthatha malunga nemizuzu eyi-20 ukufikelela kwisikhululo sikaloliwe kunye nesikhululo seenqwelomoya.Iindawo ezikujikelezileyo zithandwa kakhulu, ziyancomeka emini, kwaye zithi cwaka ebusuku!
Umbuki zindwendwe ngu- 认证手机用户7799